Sehatra Ho An’ny Fahasamihafana Ny Kliobanà Kitra Mitafy Hijab any Amin’ny Farany Atsimon’i Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2016 14:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, bahasa Indonesia, Español, English
Mpiray ekipa ao amin'ny Buku FC tamin'ny lalaony voalohany. Sary avy tamin'i Fadila Hamidong, nomen'i Prachatai maimaimpoana.
Avy tamin'i Prachatai, vohikalam-baovao mahaleo tena any Thailand, ito lahatsoratra nalefan'i Thaweeporn Kummetha ito, ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices ho ampahan'ny fifanekena fizaràna votoaty. Nadikan'i Asaree Thaitrakulpanich ilay .
Naoty ho an'ireo mpamaky: Bodista ny ankamaroan'ny any Thailandy, raha toa ka Silamo Malay ny maro an'isa amin'ny mponina any amin'ny Farany Atsimon'i Thailandy, ary mitady hametraka fanjakana misaraka ireo vondrona sasany aty.
Ny fifandirana izay nanala aina 6.500 isa tao anatin'ireo 12 taona lasa no hany zavatra fantatry ny olona maro momba ny faritra Farany Atsimon'i Thailandy, antsoin'ireo eo an-toerana hoe “Patani”. Samy miraradraraka ao amin'ilay faritra daholo na ny famatsiambolan'ny fanjakana na ny an'ny tsy miankina, mba entina hitadiavana vahaolana amin'ilay herisetra amin'ny alalan'ny dingana fampihavanana.
Kanefa, nisisika ihany i Anticha Saengchai sy Daranee Thongsiri, LGBT mpikatroka mafana fo sady ireo roa tompon'ny Buku Books & More Pattani Bookstore, hoe manana olana maro hafa ara-piarahamonina tokony hifanakalozana hevitra i Patani, toy ny miralenta. Mieritreritra i Anticha sy Daranee fa tokony manana anjara fitenenany ireo vehivavy sy ny olona LGBT ao anatin'ny dingan'ny fampihavanana any amin'ny Farany Atsimo, amin'ny fanomezana azy ireo feo hamaritana ny ho avin'i Patani.
Mba handrosoana amin'io ady io, namorona ny kliobanà kitra antsoina hoe Buku FC i Anticha sy i Daranee, mba hanome sehatra hanehoan'ireo vehivavy eo an-toerana sy ireo olona LGBT ny maha izy azy. Taminà tafatafafa niaraka tamin'i Prachatai, niresaka nikasika ilay tetikasa i Anticha:
Hita ho fanatanjahantenan'ny lehilahy ny baolina kitra, ary sehatra ho an'ireo lehilahy. Mandeha matetika eny amin'ireo kianja filalaovam-baolina kitra ireo vehivavy ho toy ny mpanatrika ihany, mampahery ireo lehilahy milalao. Fa ny tena marina, ny rehetra, tsy anavahana na lahy izy na vavy, samy afaka mandaka baolina boribory daholo. Amin'ny fanombohana ny kliobanà baolina kitra sy fisarihana ireo vehivavy mba hanjohy io, milaza amin'ny fiarahamonin'i Patani izahay hoe afaka manao izay zavatra ataon'ireo lehilahy ihany koa ireo vehivavy. Tianay hafindra amin'ireo vehivavy tonga miaraka milalao aminay ny hevitra hoe tena afaka manao ireo zavatra noeritreretiny tsy afaka ataony mihitsy izy ireo, toy ny filazàna ny heviny samirery sy ny fitarihana. Mino izahay fa hisy vokany amin'ireo ampahany hafa amin'ny fiainany ny filalaovana baolina kitra.
Raha toa ka mankahery ireo vehivavy sy olona LGBT hanjohy azy ny Buku FC, samy afaka milalao ao amin'ilay ekipa daholo ny rehetra, tsy anavahana ny maha lahy na vavy, taona, fivavahana, finoana, na ireo fijery ara-politika. Ny hany takiana dia hoe tokony hijery ny tontolo amin'ny alalan'ny “Mason'ny Miralenta” ny olona, na mahatakatra tsara ny miralenta.
Mieritreritra ny hanao ny kianja fanaovana baolina kitra ho lasa endri-piarahamonina kely izahay, izay ahafahan'ireo olona lahy sy vavy miara-miaina mitovy, mifanaja vatana sy toerana. Raha mety miseho amin'ny fiarahamonina mivelatra be izany, mino ihany koa izahay fa ho afaka atao tsara eo amin'ito kianja efajoro kelinay ito. Te-hampiseho izahay fa na lahy, na vavy, na LGBT, na olona manana mari-pahaizana samihafa, samy afaka milalao kilalao mitovy daholo isika, eo ambany fepetra mitovy, tsy misy hoe manambanimbany ny olona kely ny olona lehibe.
Ny 13 Aogositra 2016, nilalao voalohany tao amin'ny Kianja Victory ao amin'ny distrikan'i Mueang, Faritanin'i Pattani, ny Buku FC, teo ambany teny faneva hoe “Baolina Kitra ho an'ny Fampihavanana sy Fitoviana”. Mpandray anjara 20 isa izy ireo, ahitana vehivavy 17 sy lehilahy telo. Mpianatra avy ao amin'ny toeram-ponenan'ny Anjerimanontolon'ny Prince of Songkla ao Pattani ny ankamaroan'ireo mpilalao. Hita ho nientanentana ny hilalao amin'ny kianja manara-penitra daholo ny tsirairay—indrindra ireo vehivavy, izay ny ankamaroan'izy ireo, sambany mihitsy vao nilalao baolina kitra voalohany.
Waeasmir Waemano sy Sawani Mama, mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Prince of Songkla ao Pattani, milaza fa tiany ho hitan'ny fiarahamonina fa afaka milalao baolina kitra ireo vehivavy, ary afaka manao izany na misalotra hijabs aza. Sary avy tamin'i Fadila Hamidong, nomen'i Prachatai maimaimpoana.
Hijabs sy Baolina kitra? Afaka miaraka!
Waeasmir Waemano, mpianatra amin'ny taona fahefatra ao amin'ny Sampana Siansa Ara-politika ao amin'ny Anjerimanontolon'i Prince of Songkla ao Pattani, nilaza izao tamin'i Prachatai:
Matetika ireo olona mahita ny baolina kitra ho fanatanjahantenan'ny lehilahy, noho izany mieritreritra ireo vehivavy fa tsy tokony hilalao baolina kitra, ary tsy mahasahy izy ireo. Any amin'ny Farany Atsimo, mieritreritra ireo olona fa tsy mety amin'ny vehivavy ny milalao baolina kitra satria io dia fanatanjahantena mitaky anao hanainga ranjo mba handaka. Kanefa, miova ny tontolo ary tokony manaraka izany koa ny fiarahamonina any amin'ny Farany Atsimo.
Na manao fanatanjahantena matetika aza i Waeasmir hatramin'ny naha-tao amin'ny ekipan'ny kitra anaty trano azy ao amin'ny Anjerimanontolony, mbola mihambahamba ny hilalao eny ivelan'ny Anjerimanontolony ao amin'ny Kianja Victory ihany izy, izay kianja filalaovana baolina kitra izay lehilahy daholo ireo mpilalaony no eo anilany.
Raha manao fanatanjahantena any ivelan'ny Anjerimanontolo aho, mahazo fijery hafahafa avy amin'ny olona, satria izy ireo mieritreritra hoe ‘Oay, vehivavy Silamo milalao baolina kitra.’ Miasa saina loatra amin'ny ara-batana ny olona any amin'ny Farany Atsimo, ary mahatsapa izy ireo fa tsy mety [ho an'ireo vehivavy ny milalao baolina kitra], satria rehefa mihazakazaka isika, mihontsankontsana ny ampahan'ny vatantsika.
Sawani Mama, mpianatra amin'ny taona fahatelo ao amin'ny sampana mitovy amin'ny misy an'i Waeasmir, naneho ny ahiahiny momba ny vatany sy ireo fanatanjahantena. Natahotra izy hoe hitsara azy ireo olona hafa satria tsy mety ny mihazakazaka mandritra ny baolina kitra. Kanefa, voavahany io olana io tamin'ny fanaovany akanjo ambony roa sosona malalaka sy hijab izay manarona ny tratrany manontolo.
Indraindray aho mbola matahotra hoe rehefa mihazakazaka aho, hitombo ny nonoko, na zavatra tahàka izany. Fa manao akanjo ambony malalaka foana aho, sy hijab, ary lokomena rehefa milalao baolina kitra. Ka mahatsapa aho fa afaka miaraka daholo izany zavatra rehetra izany, tsy misy olana.
Samy miaiky ireo vehivavy roa fa hetsika sady manindrahindra ny fanehoankevitry ny tena ny filalaovana baolina kitra, no sady fitaovana hilazàna amin'ny fiarahamonina fa afaka manao fanatanjahantena mitovy amin'ireo ataon'ny lehilahy ireo vehivavy.
Nanampy i Anticha hoe, mba hahazoan'ireo vehivavy ao amin'ny ekipa aina tsara rehefa milalao, tsy mbola nandray anjara niaraka tamin'izy ireo aloha ireo lehilahy taminà kilalao niarahana. Afaka miaraka izy ireo, rehefa mitarika ny fanafanam-batana ireo lehilahy na hoe manao mpiandry tsatokazo. Aorian'ny ahazoan'ny tsirairay ireo fepetra sy mifanaja ary mahafantatra ny fahasamihafan'ny vatany, mety hanokatra sehatra hiarahan'ireo lehilahy sy vehivavy milalao aminà kilalao mitovy izahay amin'ny ho avy, hoy izy nanazava.
Mpiara-milalao ao amin'ny ekipa Buku FC manao famanam-batana mialohan'ny hilalaovana baolina kitra. Sary avy tamin'i Fadila Hamidong, nomen'i Prachatai maimaimpoana.
Tsy Ampy Toerana Hanaovana Fanazaran-tena sy Hitaizana ny Fahasalamany Ireo Vehivavy any Amin'ny Farany Atsimo
Nilaza i Anticha fa tsy manana fahafahana betsaka hanaovana fanazaran-tena ireo vehivavy any amin'ny Farany Atsimo. Ny ampahan'izany noho ny andraikitra omena ny lehilahy sy ny vehivavy, ary ireo andraikitry ny vehivavy amin'ny fikarakarana ny trano, ny vadiny, ary ny zanany. Mila manampy ny reniny amin'ny asa ao an-tokatrano ihany koa ireo tovovavy, ary tsy mora ekena ho azy ireo ny manao izany eny imasom-bahoaka, tsy toy ireo tovolahy.
Ankoatra izany, mitaky ireo vehivavy hanao pataloha ihany koa matetika ireo fanazaran-tena, ary manetsika ireo vatana ao amin'ny toerana misy lehilahy, ka mahatonga ireo vehivavy Silamo any amin'ny Farany Atsimo tsy hanao fanazaran-tena. Marina fa tsy manana io famerana io ireo lehilahy sy tovolahy, hoy Anticha. Ireo lehilahy no saika mameno tanteraka ireo kianjan'ny daholobe sy ireo kianja filalaovana.
Mieritreritra i Anticha fa tokony hisy fanohanana bebe kokoa mba hanaovana toerana hilalaovana natokana ho an'ireo vehivavy any amin'ny Farany Atsimo, toy ny dobo filomanosana ho an'ny vehivavy, izay manome fahatonian-tsaina ho an'ireo vehivavy rehefa milalao izy ireo.
Avy tamin'i Prachatai, vohikalam-baovao tsy miankina ao Thailandy, ito lahatsoratra avy tamin'i Thaweeporn Kummetha ito, ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices ho anisan'ny fifanekena fifampizaràna votoaty. Lahatsoratra nadikan'i Asaree Thaitrakulpanich.